Xogo Tibaaxay Cabdiraxmaan Aw-cali Faarax Oo Kusoo Biiray Tartanka Musharaxnimada Xisbiga KULMIYE |
Xogo Tibaaxay Cabdiraxmaan Aw-cali Faarax Oo Kusoo Biiray Tartanka Musharaxnimada Xisbiga KULMIYE
Hargeysa(GNN) Warar Wargeyska Yool ka helay ilo-wareedo ku dhow-dhow dhaqdhaqaaqyada Xisbiga KULMIYE, ayaa tibaaxay Madaxweye-ku-xigeenkii hore ee Somaliland Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax inuu hadda u cimaamatay sidii uu mar kale isugu soo taagi lahaa jagadda musharaxa Madaxweyne-ku-xigeenka ee Xisbiga KULMIYE. Ma jiro war amuurta si cad daboolka uga qaaday oo kasoo baxay Mujaahidka Xisbiga mid koodna.
Hase-yeeshee sida lagu xusey xoggo Wargeysku helay, waxa Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax damaciisa kursiga soo bandhigi doonaa maalmaha fooda inagu soo hayaa, kaddib marka uu kasoo dhamaado kullamo ku saabsan lataashiyo hoose xubno iskugu jiraa Mujaahidiin, Saaxiibo hore iyo Beeshiisa. Waxana wararku intaa raaciyeen in natiijada badi kullamadii uu la yeeshay dhinacyada kor ku xusan ay isku garaab taageen, kuna bogaadiyeen hankiisa.
Waxa kaloo, xogguhu iftiimiyeen in damaca Mujaahidka ee Kursiga Madaxweyne-ku-xigeenku aanu ku e’keeyn isagoo keliya, balse sida wararka lagu sheegay jagadan, waxa iyana uu taagan Wasiirka Caafimaadka Dr. Saleebaan Xagla Toosiye, iyo Madaxweyne ku-xigeenka hadda xilka hayaa Cabdiraxamaan Cabdilahi Ismaacil (Saylici).
Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax oo doorashadii aqalka Madaxtooyada ee 2003-dii jagadan ugu tartamay Xisbiga KULMIYE, waxa saaxadda siyaasadda uu ka maqnaa tan iyo intii ka danbeysay 2008-dii, kadib markii uu ka cadhooday qaabkii loo agaasimay ergada iyo hawlaha shirkii Golaha Dhexe ee Magaalada Burco, inkasta oo Mujaahidku kasokow cadhadaa kala kulantay shirka Burco, hadana marna ma sheegeen inuu Xisbiga ka baxay iyo inuu xubinimadii Xisbiga ka tanaasuley. Hase-ahaatee, waxa cadhadiisu noqotay mid e’g Sunne uu la wadaagayey saaxiibkii Muj. Ibraahin Dhega-weyne oo dhacdo tan la mid ahi kaga dhacday shirkii kaa ka horeyay ee ka dhacay Hotelka Ambaasador.
Geesta kale, han-qal taaga iyo Laab lasoo kaca Mujaahid Cabdiraxmaan Aw Cali ee xilligan ayaa ah mid saameynteeda leh, gaar ahaan marka loo eego xubnaha kalee damacu jagadan ka hayo, Barri iyo Galbeed labada-ba, balse marka taa laga yimaado, damaca Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali, waxa dhimbiil Dab ah uu ku yahay haddii Muuse Bixi uu kusoo baxo jagada Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga KULMIYE, oo marka labadoodu isku noqdaan Musharraxa Madaxweyne iyo ku xigeenkiisi. Maxaa yeelay xidhiidhka labada Mujaahid ma fiicnayan tan iyo shirkii gogala dhexe ee Burco.
Waqtigaas oo sida ay ku doodan, dadka Siyaasadda Xisbiga KULMIYE isha ku hayey, Muj Muuse bixi uu ka mid ahaa shaqsiyaadkii ku adkaaystay Cabdiraxmaan Aw Cali Xisbigu inuu ku jabaayo, haddii mar kale loo sharraaxo Jaggada Madaxweyne ku-xigeenka. Arrintaaso sida xaggaha qaar tibaaxan arrimihii Mujaahidka lagu duraayey ay ka mid ah inay isku beel yihiin Madaxweynihii hore ee Somaliland Md. Daahir Riyaale Kaahin, sida awgeedna aan Beeshiisu isku doorsaneyn Madaxweyne iyo Ku-xigeen, sida runtu tahay ay raacayaan dhanka waafiga ah ee Madaxweynaha, Waxa’se arrimuhuu kala cadaan doonaan maalmaha foodda inagu soo hayaa 18-cisho kaddib, waqtigaaso ku eg mudadii loo asteeyey qabsoomida Shirweynaha Xisbiga KULMIYE.